राजाको छोरो झुपडी र गाउमा ! एक साता अगाडि तनहुँको चिया पसलमा भेटिएका थिए पारस – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/राजाको छोरो झुपडी र गाउमा ! एक साता अगाडि तनहुँको चिया पसलमा भेटिएका थिए पारस
दमौली ।राजतन्त्र न’ढलेको भए पूर्व युवराज पारस यतिबेला आ’लिसन नारायणहिटी दरबारमा हुने थिए । तर ज’नआन्दोलन भाग २ को ब’लमा रा’जतन्त्र अ’न्त्य हुन पुग्यो । राजतन्त्र अन्त्य भएसगै पूर्वराज परिवार नारायणहिटी दरबार छा’डेर आफ्नै निजी निवास निर्मल निवास बस्दै आईरहेको छ । तर पूर्व युवराज पारस शाह भने पारिवारिक बे’मेल भएसगै लामो समय देखि बेग्लै बस्दै आईरहेका छन् । यसरी बेग्लै बस्ने क्रममा उनी लामो समय थाइल्याण्डमा बसे भने केही बर्ष अगाडि नेपाल फर्किएका छन् ।
नेपाल फर्किएपछि पनि पारस आफ्नै हि’साबले बस्दै आईरहेका छन् । पछिल्लो समय त पारस पोखरामा बस्ने गरेका छन् । पोखरामा बस्दै आईरहेका पारस बेला–बेलामा देशका विभिन्न भागमा धा’र्मिक तथा घु’मफिरका लागि नि’स्कने गरेका छन् । यसरी घु’मफिरमा निस्कने क्रममा पारस गाउँबस्ती र सडक पेटीका झु’पडीमा समेत भेटिन थालेका छन् । यसैक्रममा केही दिन अगाडि पारस तनहुँको घाँ’सीकुवा स्थित एक चिया पसलमा भेटिएका थिए । साथीसंग चिया पसलमा छि’रेका पारस सामान्य प’हिरिनमा रहेका थिए ।
चिया पसल सञ्चालकले बताए अनुसार उनी करिब आधा घण्टा जति पसलमा बसेका थिए ।पारस चियापसलमा छि’रेर सगै स्थानीयलाई नि’कै चा’सोको साथ हेरेका थिए ।साथै पारससंग तस्बिर खिच्नका लागि इ’च्छा समेत देखाएका थिए ।तर पारसले चियापसलकी स’ञ्चालिका बाहेक अन्य संग भने तस्बिर खि’चेका थिएनन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
हास्य कलाकार दीपकराज गिरिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिए दनक, भने, ‘अप्राकृतिक कामबाट रहेको ओली प्रचण्डको गर्भ तुहियो’